Xisbiga WADDANI - xisbigawaddani.com
Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi [Cirro] waa xeel-dheere diblomaasi ah, kaas oo ka soo qabtay xilal kala duwan Wasaaraddii Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya, Burburkii Dowladdii dhexe ee Soomaaliya kaddib, waxa uu Cirro ka qeyb-galay dib u dhiskii Jamhuuriyadda Somaliland, haddii ay tahay Ganacsi iyo Siyaasadba.
Cirro, waxa uu ahaa siyaasiyiintii ugu horreysay ee dhidibadda u taagay nidaamka Xisbiyada badan ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ka hano-qaaday sannadkii 2002dii, intaa kaddib-na waxa uu noqday xubin ka mid ah Baaralamaankii ugu horreeyey ee shacabku soo doortay 2005tii, isaga oo ahaa xubintii ugu codka badneyd ee Gobolka Saaxil, Cirro waxa uu ku guuleystay in uu hoggaamiyo Golihii Wakiilada ee ugu horreeyey ee cod dad-weyne ku fadhiista Barlamaanka JSL, isaga oo noqday Guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ee Golaha Wakiilada intii ay Somaliland jirtay oo uu 12 sanno maamulayey Golahaas.
Cabdiraxmaan Cirro, waa aasaasaha Xisbiga ugu weyn Mucaaradka Somaliland ee WADDANI 2012kii, isla markaana ah Guddoomiyaha Xisbiga iyo Murashhaxa Madaxweynaha, Khibradda Guddoomiye Cirro waa isku dhaf isugu jirta ganacsiga, diblomaasiyadda iyo Hoggaaminta, taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah Khubarada iyo waayo-aragga hoggaamiyayaasha Geeska Afrika. Guddoomiye Cirro, waxa uu sidoo kale yahay Xubin sharafeed ka tirsan Golaha Guurtida ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Cirro, waxa uu haystaa shahaadooyinka kala ah BSc Xisaabaadka (SIDAM/ California State University, FRESNO, USA), MBA (SIDAM/ New York State University, Sunny, Albany, USA), Diploma sare oo daraasadaha Afrika ah ( Institute of African Studies, Moscow, Russia), Shahaado heerka labaad ee Jaamacadda oo la xidhiidha Xallinta Khilaafaadka (Machadka nabadda iyo Xallinta khilaafaadka, Jaamacadda Hargeysa, iyo Jaamacadaha UPEACE in Costa Rica iyo Mennonite University, USA), Shahaado sharafeed Ph. D. ( New Generation University, Addis Ababa , Ethiopia).
Cirro afafka uu ku hadlo waxaa ka mid luqadaha Soomaaliga, Ingiriisida, Carabida, Raashiyaanka, iyo Luqadda Finnish-ka.
Road Number 1, Maamuus Hotel, Hargaysa Somaliland
Xisbiga WADDANI, waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaalilaan, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardar-gelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaalilaan leedahay oo uu ugu horreeyo Ictiraaf keenista. Xisbiga WADDANI waxa uu albaabo cusub u furayaa da'yarta si ay xooggooda maskax iyo muruqba ugu dhisan-lahayeen dalkooda, isaga oo bulsha weynta reer Somalilaan ku hoggaaminaya hiiraal iyo hiigsi midaysan bari, badhtamaha iyo galbeedba.
Xubinnimada Xisbiga WADDANI
Sida uu dhigayo Qoddobka 5.aad ee Xeerka Xisbiga WADDANI
Waxa Xisbiga xubin ka noqon kara muwaadin kasta oo u dhashay Somaliland oo qaangaadh ah, xiskiisuna u dhan yahay.
Xubinnimada Xisbigu waa shakhsi umana gudbi karto cid kale lamana kala dhaxli karo.
Waxa xubin noqon kara xubnaha Hoggaanka xisbigu u arkaan I nay Xisbiga u leeyihiin waxtar wax ku ool ah kuwaas oo la siinayo kaadhka xubin sharafeedka.
Qoddobka 6.aad ee Shuruudaha xubinnimada:
Waxaa ka mid noqon kara Xisbiga WADDANI qof kasta oo Somalilander ah oo aaminsan mabaadii'ida Xisbiga kuna dhaqma xeerkiisa, buuxiyeyna shuruudaha hoos ku qoran:
In uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland.
In aanay da'diisu ka yaraan 15 sano.
In uu caqli ahaan fayow yahay.
In uu codsi qoraal ah oo xubin-ka-noqosho ah soo gaadhsiiyo xafiiska Xisbiga WADDANI degmada, gobalka uu degen yahay ama laanta ugu dhow ee dibedda.
In uu yahay qof ku sifoobay akhlaaq iyo dhaqan wanaag.
Inaanu xubin ama taageere u ahayn Xisbi kale
In uu bil kasta bixiyo lacagta xubinimada Xisbiga.